Myanmar Property Knowledge Guide | ShweProperty
မြေပိုင်၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ နှင့် ဂရန်မြေ တို့ကို မြေကွက် မြေပုံ နှင့် မြေစာရင်း တို့မှာ ခွဲမယ်ဆိုရင်
မြေကွက်ကို ခွဲ ခြမ်းစိတ်ဖြာမယ်ဆိုရင် မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ (အိမ်ရာမြေ)၊ ဂရန် မြေရှိတဲ့ မြေပိုင်… read more...
အတ္တလန္တစ်မြို့တော် ရေအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာ မှန်ကန်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များဆို
ရှေးဟောင်းမြို့တော် အတ္တလန္တစ်မြို့ဟာ သမိုင်းထဲမှာ တကယ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ မြို့ကြီးဟာ ဘီစီ 1500 ခန့်က… read more...
သရဲတွေနေထိုင်တဲ့ မြို့တော် (၅) ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ ယခင်က နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေး… read more...
မိန်းမက နှင်ချပြီး သော့ခလောက်တွေ ပြောင်းပစ်ခဲ့တာကြောင့် ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းတန် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝင်းထဲက မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ခြောက်လကြာ အိမ်ခြေရာမဲ့အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ရသူ
ဆရာဝန်ဖြစ်သူမိန်းမက ကန်ချပြီးနောက်၊ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် သူဌေးအဘိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒေါ်လာ… read more...
တိုက်ခန်း ဝယ်ယူစဉ်က မြေရှင် လက်မှတ်ထိုးခကိုပါ စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုသင့်
တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်တွင် အမည်ပြောင်းခနှင့် လခပေးဆောင်နေရခြင်းများမှာ ယခုထိ ရှိနေသေးသောကြောင့် တိုက်ခန်းစတင်ဝယ်ယူသည့်… read more...
လမ်းမတွေ မရှိတဲ့ရွာ သို့မဟုတ် Venice of Holland
အကြည့်တစ်ချက်မှာပဲ ဒီမခန်းဖွယ် ဒတ်ခ်ျရွာလေးဟာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေထဲက နေရာတစ်နေရာလို့တောင် ထင်မှတ်စေပါတယ်။… read more...
သင့်အား မုချ ကြီးပွားချမ်းသာကြွယ်စေမည့် ရတနာသေတ္တာ လုပ်နည်း (ဆရာဟိန်းတင့်ဇော်)
မဟာဘုတ်နှင့် ရတနာသေတ္တာ လုပ်နည်းပါ။ အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အရမ်းလည်း ကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်းလည်း… read more...
သင်တုိ့၏ မီးဖိုချောင်တွင် အသံတိတ်လူသတ်သမား ရောက်နေပါပြီလား...... လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်… read more...
သင်ဘယ်လိုအိမ်မျိုးနဲ့နေရမလဲ ( ဇင်ယော်နီ)
ကျွန်နုပ်ဧ။်အဘိုးတစ်ဦးသည် ကုန်ထမ်းသောအလုပ်ဖြင့် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာအသက်မွေးရလေဧ။်။ သို့ရာတွင် ၄င်းဧ။်အိမ်ကလေးမှာမူ… read more...
လှိမ့်ဝင်တည်သုံး စဉ့်အိုးအဆောင် အကြောင်း
လှိမ့်ဝင်တည်သုံးစဉ့်အိုးအဆောင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးကြတာတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံး… read more...
မြေပုံမြေရာဇဝင်ရေးကူးရန်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့သူတွေ ကတော့ မြေကွက်အမည်ပေါက်သူ၊ GP,SP ရထားသူ၊ အမွေဆက်ခံသူအမျိုးမျိုးနဲ့… read more...
ဘဏ်မှချေးငွေ ရယူလိုပါလျှင် သိထားသင့်သည့် အချက်များ
ဘဏ် မှငွေချေးယူ လိုပါက ဦးစွာငွေချေးယူမည့်ဘဏ်တွင် ဘဏ်ချေးငွေ အတွက် သတ်မှတ် ပုံစံဖြင့် လျှောက်လွှာ တင်ရမည်။သ… read more...
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းမှားဝယ်မှားမဖြစ်အောင် သင်ဒါတွေ သိထားဖို့လို
အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ်မှာ ရောင်းမှားဝယ်မှားမဖြစ်အာင် စိစစ်သင့်တဲ့ အချက်တွေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။တချို့တွေက… read more...
ဓာတ်လှေကား ၁၀ ခုမှာ ၈ ခုထဲ ပါဝင်တဲ့ အပိတ်ခလုတ် ဟာ တကယ် အလုပ်မလုပ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းကို အမေရိကန်အခြေစိုက်… read more...
အိမ်နှင့် ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ရှေးထုံး အစဉ် အလာများ
အခုခေတ် မြန်မာတွေကတော့ ဒါတွေဟာ လောကီအယူအဆတွေပါ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြေင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင် ပြောနေပါ လိမ့်မယ်။… read more...
အိမ်တွင်းယဉ်ကျေးမှု (၃၇) ချက်
သာယာအေးချမ်းတဲ့ အိမ်ကလေးဆိုတာကို လူသားတိုင်း တောင့်တကြသလို အဲ့သည်အိမ်ကလေး သာယာအေးချမ်း မင်္ဂလာရှိဖို့ကလည်း… read more...
မိသားစုတွေပျော်စေဖို့ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနတွေက ဘာပြောထားသလဲ (သို့မဟုတ်) ပျော်ရွှင်သော မိသားစုဘဝများ၏ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၇) ခု
Bruce Feiler ဟာ ‘ပျော်ရွှင်သော မိသားစုဘဝများ၏ လျှို့ဝှက်ချက်’ The Secrets of Happy Families ဟူသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။… read more...
သင်၏နေအိမ် မျက်နှာလှည့်သောအရပ်ကို ကြည့်၍ လာဘ်လာဘပွင့်လန်းစေသောနည်း
လာဘ်ပွင့်စေသော ယတြာမျိုးစုံ ရှိပါသည်။ ထိုယတြာနည်းများစွာတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ၏ မွေးနေ့မွေးရက် မွေးသက္ကရာဇ်များကို… read more...
အိမ်သုံးဆား၏ လက်တွေ့အသုံးဝင်ပုံ နည်းလမ်းစုံ
အိမ်တိုင်းရဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ ဟင်းချက်ဖို့အတွက် ဆားဆိုတာ မရှမဖြစ်အရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆားဟာ ဟင်းချက်ဖို့တင်မကဘူး… read more...
နေအိမ်အဆောက်အအုံနှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သော ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်များ
တချို.သည် အိမ်ဝယ်၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်ဌားရာတွင် အောက်ပါအိမ်များကို ရှောင်းရှားကြသည် ။ နေရမည်ဆိုပါက ဆောင်ရန်နည်းလမ်းများလည်း… read more...
အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖီးနစ်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့… read more...
မကြာတော့မယ့် အနာဂတ်အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် မြို့ကြီး(၆)မြို့
လူသားတွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ကြတာ မှန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်… read more...
အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗေဒင်နှင့် ရှေးအယူအဆများ
မြန်မာလူမျိုး တွေမှာ အိမ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ယုံကြည်တဲ့ ဗေဒင် ရှေးအယူအဆများစွာ ရှိပါတယ်။ ဗေဒင်အရ အိမ်ဆောက်ရက်ရွေးနည်း၊… read more...
အိမ်ငှါးက နေထိုင်တာ ၁၂ နှစ်ကျော်သွားပါက ဥပဒေအရ နှင်ချခွင့် မရှိတော့ပါဘူးတဲ့... တရားစွဲဖို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့… read more...
အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် အချက်များရှိ
အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရာမှာ ချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) နဲ့ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ… read more...
ဂရန်မြေအမျိုးအစားက တော့ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကိုအပ်ထားတဲ့ မြေကွက်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့… read more...
အိမ်ခြံမြေ စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ အလွယ်တကူ မပေးပါနဲ့
အိမ်ခြံမြေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာရွက်စာတမ်း လိမ်လည်မှုတွေ၊ အတုပြုလုပ်တာတွေ မခံရအောင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းက… read more...
လူတိုင်း အိမ်တိုင်းတွင် မင်္ဂလာရှိအောင် လုပ်ချင်ကြမှာပဲ။ တချို့အချက်တွေကြောင့် အိမ်လာဘ်တိတ် စေပါတယ်။… read more...
ခေတ်ကြီးသည် ၂၀ ရာစုမှသည် ၂၁ ရာစုသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အရာရာတို့ သည်လည်းတစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါပြီ။… read more...
ကြိုပွိုင့်စာချုပ် ဝယ်သူမနစ်နာအောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံချုပ်ပါ
ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ၊ တိုက်ခန်းတွေ ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ စာချုပ်အများစုက ဝယ်သူနစ်နာစေတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်တာမျိုးရှိတာကြောင့်… read more...
လယ်မြေမှအပ ယာမြေကို အခြားနည်းလမ်း အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ပြီး လူနေထိုင်နိုင်
လယ်ယာမြေတွေကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ လက်တစ်လုံးခြားအသုံးပြုပြီး လူနေထိုင်နေတာတွေ၊ လုပ်ငန်းလုပ်… read more...
စိတ်ဖိစီးနေလား ခြံထဲဆင်း စိုက်ပါပျိုးပါလေ
မြို့ပြဘ၀က လူကို စိတ်ဖိစီးစရာ အများအပြားနဲ့ ပေးတွေ့၏။ စိတ်ကိုဖိကာ လူကိုပါ နုံးချိစေ၏။ သိပ္ပံပညာရှင်များ… read more...
မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အိမ်ခြံမြေနဲ့ပက်သက်ပြီး အစွဲအလမ်းလေး တွေရှိပါတယ်။ လမ်းဦးတိုက် အိမ်ဦးတိုက်မနေကောင်းဘူး… read more...
လူတို့ ဦးခေါင်းထား၍ အိပ်ရမည့်အရပ်
ရှေးကလူကြီး များသည် မိမိတို့ နေရမည့်အိမ် ဆောက်လုပ် ရာတွင် မည်သည့် အရပ်ကို မျက်နှာပြု ရသည်ဖြစ်စေ ဘုရားစင်… read more...
ဂရန်မြေဝယ်လျှင် မြေအကျယ်ဧရိယာမှန်/မမှန် သတိထားစေချင်
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်များ ခေတ်မစားခင်ကဆိုလျှင် ပြည်သူအများစုမှာ မြေကွက်၊ အိမ်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်… read more...
မြေဂရန်ကို အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း လျှောက်ထားသူနည်းပါးနေ
မြေဂရန်လျှောက်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင် မှုကြေညာခြင်း စသည့်မြေယာစီမံခြင်း များကို မြို့တော်ခန်းမ၌ လာရောက် လျှောက်ထားရန်မလိုတော့ဘဲ… read more...
အိမ်ခြံမြေ ပေါက်ဈေးထက်ဈေးကွာနေရင် သတိပြုဝယ်ပါ
အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ်အေးနေတဲ့ သည်လို အချိန်တွေမှာပါ စာရွက်စာတမ်းအတုတွေနဲ့ အရောင်းတွေရှိ တာကြောင့်… read more...
အတိုးနှုန်း နှင့် စီးပွားဝင်ငွေတွက်ချက်နည်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ
စီးပွါးရေသမားများ အလုပ်လုပ်ရာ တွင် မိမိလုပ်သော လုပ်ငန်း ဘယ်လောက်အတိုးကိုက်သလဲ ဆိုတာကို ပေသီး ပြန်ခေါက်ကြပါ… read more...
အရပ်ထဲက ရောင်းပေါင်စာချုပ် ခိုင်မာမှုနည်းလို့ သတိပြုသင့်
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ထဲမှာ အရောင်းဈေးကွက်အေးနေတာကြောင့် တချို့ကငွေပေါ်အောင် ရောင်းပေါင်စာချုပ်ချူပ်ပြီး… read more...
ဂရန်မြေ၏ ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက် ပြောင်းလိုလျှင် လိုအပ်သော အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်......... •… read more...
နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ပြည်သူပြည်သားတွေ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြတယ်ဆိုတာက အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊… read more...
အခွန်ဆောင်ထားပြီးရင် ဘယ်လိုပြန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကို သိရှိမှုအားနည်းတာကြောင့် အများစုက အခွန်ဆောင်မှုနဲ့… read more...
လယ်မလုပ်တဲ့လယ်မြေ ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်များ
လယ်မလုပ်တဲ့လယ်မြေကွက်တွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းသူတွေက ပိုင်ဆိုင်မူ့အာမခံပြီး ရောင်းချတာတွေကို ဝယ်ချင်ပေမယ့်… read more...
လူတွေဟာ ကိုယ်ဘာဝယ်မလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်နေတာပဲလို့ ထင်ထားကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ… read more...
ဥပဒေနဲ့အညီ အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူခြင်း
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ အိမ်မြေကိုဝယ်ရင်၊ တရားဝင် ၀ယ်ယူခြင်းမြောက်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အဲ့ဒီ… read more...
ယခုလတ်တလော အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်ဈေးကွက် အေးနေတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကျွမ်းကျင်ပြီ… read more...
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှပြဋ္ဌာန်းထားသော မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ … read more...
အရေးကြီးတဲ့ အိမ်ခြံမြေစရန်ငွေ ဘယ်လိုချေရမလဲ
စရန်ငွေသွားပေးပေမဲ့ ပိုင်ရှင်တွေက အိမ်မှာမရှိဘဲ သော့ခတ်ထားတာကြောင့် ဦးမောင်မောင်အေးတစ်ယောက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိ… read more...
ပုံစံ (၁၀၅) လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်
ပုံစံ (၁၀၅) နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကွက်ရိုက်တာ လျှောက်ထားစဉ် ကြန့်ကြာတာတွေအတွက် သိသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်........… read more...
အချက် (၃) ချက်ခိုင်မာရင် လယ်မြေ၀ယ်ယူနိုင်
အများစုက လယ်မြေ၀ယ်ယူရင် အရှုပ်အရှင်းတွေများပြီး ခိုင်မာမှုအားနည်းတယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် အဓိကအချက်သုံးချက် ခိုင်မာရင်… read more...
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအ၀ယ် လုပ်ငန်းများတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု သေချာစေသည့်အခွန်ဆောင် အမည် ပြောင်းသူ နည်းပါး
အိမ်ခြံမြေ လောကအတွင်း အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းနှင့် ကွန်ဒိုများ အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ရာ၌ အရပ်စာချုပ်များဖြင့်သာ… read more...
နိုင်ငံခြားသား အိမ်အငှားစာချုပ် သတိထားချုပ်ဆိုပါ
နိုင်ငံခြားသား အငှားဈေးကွက် တွင်ကျယ်လာသောကြောင့် အငှားစာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိထား ချုပ်ဆိုသင့်တယ်လို့… read more...
ဂရန်ဆိုတာ ဘာလဲ မသိတဲ့အပြင် ကြေးတိုင်နဲ့ မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးတယ်လို့ ထင်နေသူတွေံ အများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ မြေစာရင်းက… read more...
အိမ်မြေ၀ယ်လျှင် အထူး သတိပြုရမည့် စာရွက်စာတမ်း အတုများ
တစ်နေ့က နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာ တရားမဝင် မြေရောင်း မြေဝယ်တွေ ပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်'' ဟု… read more...
နယ်မြို့လေးတစ်ခုမှ အဖြစ်မှန်လေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို မြေနေရာလေးတွေချပေးလေ့ရှိပြီး… read more...
ပြင်ဦးလွင် စံအိမ်တော်သို့ အလည်တခေါက်
ကိုလိုနီခေတ် လက်ကျန် သမိုင်းလက်စလက်န များစွာရှိနေတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့လေးကို မန္တလေးမြို့မှာ နေတဲ့ စာရေးသူအနေနဲ့… read more...
ပါမစ်မြေ ၀ယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ပါမစ်မြေကွက်ကို ဝယ် လျှင် တရားဝင်ဆိုင်ခွင့်ရပါသလား။ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသလားဟု… read more...
အိမ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် မိမိအိမ်တွင် အပိုင်း (၉) ပိုင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်း (၉) ပိုင်းသည် အိမ်တိုင်းအတွက်… read more...
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ခွန် ရောင်းခွန် ဘယ်လိုဆောင်မလဲ
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အိမ်နှင့်မြေ(ဂရန်မြေ) ဝယ်လိုက်သောကြောင့် ဝယ်ခွန်ရောင်းခွန် မည်သို့ ထမ်းဆောင်ရပါသလဲဟု မေး… read more...
ကျွန်တော်တို့က ရှေ့နေတွေမှမဟုတ်ပဲ၊ စာချုပ်တစ်စောင်ရဲ့ အတိမ်အနက်နဲ့၊ ဥပဒေကြောင်းတွေကို ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ။… read more...
အရပ်စာချုပ်နဲ့ မြေကွက်ဝယ်ထားတာ နှစ်ကြာနေပြီး အမည်မပြောင်းလဲပဲ ထားရာက အရင်အမည်ပေါက် ပိုင်ရှင်ရဲ့ မိသားစုဝင်က… read more...
ဆွေမျိုးဆီက ၀ယ်လည်းအမည်ပေါက် ပြောင်းထားမှ
မသီတာ (အမည်လွှဲ) က အဘွားအမည်ပေါက်ပိုင် အိမ်ကိုပြန်ဝယ်လိုက်ပြီး အမည်ပေါက်မပြောင်းပဲ ထားလိုက်တယ်။ ဦးလေးက စာရွက်စာတမ်တွေယူပေါင်ထားပြီး… read more...
ဂရန်ကနေ ပါမစ်၊ ပါမစ်ကနေ ဂရန် လျှောက်မယ်ဆိုရင်.....
ကျွန်တော်တို့ Shweproperty.com ကို Facebook Page ကနေတဆင့်ကော ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ မေးမြန်းထားကြတဲ့ သူများအတွက် အိမ်ခြံမြေဂဏ္ဍမှာ ဂရန်ကနေ… read more...
အ ထ ပ် မြ င့်နေ ထို င် သူ များ ရဲ့ ဒု က္ခ
ရန်ကုန်မြို့ဟု ဆိုလိုက်ကတည်းက အဓိက ပြေးမြင်မိတာကတော့ ဆူးလေစေတီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အထပ်မြင့် တိုက်တွေရဲ့… read more...
အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းအပြင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ခိုင်မာမှုကိုလည်း ဦးစားပေးရန် လိုအပ်
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ဖို့စဉ်းစားရင် ဈေးနှုန်းအပြင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ခိုင်မာမှုကိုလည်း ဦးစားပေးစစ်ဆေးဖို့လိုကြောင်း… read more...
မြေရှင်အသိအမှတ်ပြုက တိုက်ခန်းနေသူတွေ အတွက် အရေးကြီး
တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို ဝယ်ယူ မှုတွေမှာ မြေရှင်ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းက လည်း ခိုင်မာမှုအတွက် အရေးကြီးတယ် လို့ သိရပါတယ်။… read more...
မြေ ဘယ်လို ဝယ်မလဲ
Photo Credit : Internet တစ်ချို့သောစာဖတ်သူများက မြေ၀ယ်ချင်လို့ ဘယ်လိုများ ၀ယ်ရမလဲဆိုတဲ့ မြေ၀ယ်နည်းများကိုမေးမြန်းလာတဲ့… read more...
(၁) မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှ နိုင်ငံတော်မြေပုံတို့၌ မြန်မာပြည်မြေပုံက အလှဆုံးဖြစ်သည်။ ကိုယ် မမြင်မတွေ့ဖူးသည့် နိုင်ငံတော်မြေပုံတစ်ခုက… read more...
အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူမယ့်သူတွေ သိသင့်တဲ့ အချက်များ
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေကို ၀ယ်ရင် သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) စာချုပ်ချုပ်ရမယ်၊… read more...
မလည်မ၀ယ် မကျွမ်းကျင်ရင် ခံသွားရမယ်
ဈေးကွက်ထဲမှာ မကျွမ်းမကျင် မလည်မ၀ယ်နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ပွဲစားတွေကို စားကွက်ချပြီး ခြားခံလုပ်ကြတာကို တချို့ကမသိဘဲ… read more...
မြန်မာကသာမက ကမ္ဘာကပင်လေးစားရသည့် စံပြပုဂ္ဂုလ် ဦးသန့်နေထိုင် ခဲ့ရာ အိမ်ဂေဟာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်နှင့်Gantry ပလာဇာ ပန်းခြံအကြား East River ထဲ၌ အလျား ပေ ၁ဝဝ၊ အနံပေ ၂ဝဝ ရှိသည့်… read more...
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူသူ အများစုဟာ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် မြေရဲ့ မြို့နယ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မ၀ယ်ခင်စစ်ဆေးတာတွေ… read more...
မိတ်ဆွေတွေ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ နေလိုတယ်လို့ လာလာပြောကြတာရှိတယ်။ အဲလိုလာပြောရင်တော့ အောက်ကယတြာတွေကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။… read more...
အိမ်ဝယ်ရန်နှင့် ငှားရန် ရှာဖွေသော အခါ အသုံးပြုသင့်သော ယတြာနည်း
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က ပစ္စည်းတစ်ခုကို လိုအပ်နေတယ်။ ရှာနေတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဥပမာ အိမ်တစ် လုံး ၀ယ်ဖို့… read more...
ဝယ်ထားသည့် ပါမစ်မြေကွက်မှာ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားသူရှိနေလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲ
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်းအဝယ်လောကတွင် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ များ ရောင်းကြ ဝယ်ကြသောအခါ ရောင်းသူ ဝယ်သူများမှာ မြေကွက်ဖြစ်စေ၊… read more...
မြေ၀ယ်မယ်ဆိုရင် မသိမဖြစ် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
မြေ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ ၁။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား … read more...
ယခုဆိုရင် လယ်မြေတွေကိုလည်းအကွက်ရိုက်ပြီး တချို့ရောင်းချနေသည်ကိုတွေရှိရပါသည် ။ ဈေးအရမ်းပေါတယ်ဆိုပြီး မ၀ယ်ကြပါနဲ့… read more...
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်းချသူများ လိုက်နာရန် တာဝန်(၉) ချက်
အရောင်းစာရေးများအတွက် ကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ(သို့မဟုတ်) customer များနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရသော အခါတွင် ဂရုတစိုက်… read more...
တိုက်ခန်း အရောင်းအ၀ယ်၌ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးလက်ခံကြဖို့လို
ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း တိုက်ခန်းများ ၀ယ်ယူရာ၌ တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ၀ယ်ယူသည့်အခါ၌ စာချုပ်စာတန်းများတွင်… read more...
ပါမစ်မြေ ၀ယ်ယူထားသူများ သိအပ်စရာ
ယခုခေတ်သည် မြေကွက်အရောင်းအ၀ယ်တွင်ကျယ်သော ကာလဖြစ်ပြီး ငွေပိုငွေလျှံ ရှိသူများအဖို့ မြေကွက် ၀ယ်ရောင်းခြင်းမှာ… read more...
မြေခွန်ပြေစာ အတုတွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားပြပြီး ရောင်းချတာတွေ ရှိနေတာကြောင့် တန်ဖိုးနည်းမြေကွက်… read more...
မြေတိုင်း လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင် သိရှိထားသင့်သည်များ
မြေတိုင်းတာခြင်း ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ စိုက်ပျိုးမြေနဲ့ ရွာမြေက လွဲရင် မြေတိုင်းတာပြီး မြေပုံထုတ်ပေးပါတယ်။… read more...
ဈေးလျှော့တဲ့ တိုက်ခန်း သေချာစူးစမ်းပြီးမှ ၀ယ်ပါ
တိုက်ခန်းဈေးကွက်ထဲမှာ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက် သက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ အရည်အသွေး မပြည့်မှီတဲ့ အခန်းတွေ ရောင်းချနိုင်တာကြောင့်… read more...
ဘီအိုတီစနစ်နဲ့ ပြည်ပက ဆောက်တဲ့ တိုက်ခန်း ဝယ်မယ်ဆိုရင်
ပြည်ပက ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေက အစိုးရဆီက BOT စနစ်နဲ့ ငှားထားတဲ့ မြေပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့ တိုက်ခန်း ဝယ်မယ်ဆိုရင်… read more...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးတိုင်းလိုလိုပင် အိမ်အဆောက်အဦသစ်များကို ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့်အခါ ‘အိမ်တက်မင်္ဂလာ’ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။… read more...
အိမ်ခြံမြေ အမွေရဖို့ သေချာတဲ့ နည်းရှိပါတယ်
# အဲ့ဒီနည်းက "မိသားစုစီမံမှု"လို့ ခေါ်ပါတယ်။ # လုပ်နည်းက လွယ်လွယ်လေးပါ။ ( ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ ထိရောက်ပါတယ်)… read more...
ဌာနတည်နေရာ ။ ။ ရန်ကုန်မြို.၊ ရန်ကင်းမြို.နယ် (ကံဘဲ့) ရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကွန်ဒိုတည်ဆောက်မှုမှာ များပြားလာခဲ့ပြီး ဤကဲ့သို့ များပြားလာရခြင်းမှာ မြေများရှားပါးလာသည်ကတစ်… read more...
အဆောက်အဦးတစ်ခု တရားဝင် ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတန်းများ
အဆောက်အဦးတစ်ခု တရားဝင်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတန်းများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ… read more...
စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုကြရာတွင် အသိသက်သေသည် မပါမဖြစ် ပါရှိရမည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကတိပြုသူ၊ ကတိရသူများအပြင်အသ်ိသက်သေများပါ… read more...
အမည်ပေါက်မဟုတ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်
အမည်ပေါက်မဟုတ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူတဲ့ အခါမှာ ရောင်းမှား၊ ၀ယ်မှား မဖြစ်အောင် ၀ယ်သူအနေနဲ့ အလိမ်မခံရအောင် ငွေချေတာကအစ… read more...
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
မိမိကိုယ်စား ကိုယ်စား လှယ် လွှဲအပ်သူသည် မိမိနှင့်သက် ဆိုင်သည့် တရားဥပဒေအရ အရွယ်ရောက်သူဖြစ်ပြီး စိတ်ပေါ့သွပ်… read more...
သင့်အိမ်ကိုဌားရန်အတွက် စစ်ဆေးထားသင့်တဲ့ အချက်များ
သင်ပိုင်တဲ့အိမ်ကိုအိမ်ငှားတင်တော့မယ်ဆိုပါစို့။ အခုဖော်ပြမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုလုပ်လိုက်ပါ။ အိမ်ငှားသူ… read more...
အိမ်ခြံမြေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေးများတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မေး။ ။ ခြံပြေစာတွေမှာ… read more...
ကန်ထရိုက်တာနှင့်မြေ ပိုင်ရှင်တို့အကြား သတိထားစရာများ
နည်း(၂)မျိုး အဆောက်အဦးများကို ကန်ထရိုက်တာနှင့်မြေပိုင်ရှင်တို့သည်အောက်ပါနည်း (၂)မျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်တတ်ကြပါသည်။
တိုက်ခန်း အရောင်းအ၀ယ်ပြုရာ၌ သတိပြုစရာများ
ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်းတိုက်ခန်းများ ၀ယ်ယူရာ၌ တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ၀ယ်ယူသည့်အခါ၌ စာချုပ်စာတန်းများတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းထက်… read more...
လိုင်စင်မြေ နှင့် ပါမစ်မြေ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
လိုင်စင်မြေ အစိုးရမှစီမံချထားနိုင်သောမြေ(Land of the disposal of Government)များကို အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများ… read more...
ဝါတွင်းကာလ အိမ်နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ယုံကြည်မှု
ဒကာတစ်ယောက်က “အရှင်ဘုရား ဝါဆိုချိန်နီးလာပြီဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ဝါတွင်းကာလမှ အိမ်မပြောင်းရ၊ အိမ်မရွေ့ရစတဲ့… read more...
သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း သို.မဟုတ် ရောင်းရန် ပဋိညာဉ်
ရောင်းရန် ပဋိညာဉ် Contract of Sale ဟူသည် ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူ ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်နှင့်အတူ ပြုလုပ်သည့်… read more...
စာရွက်စာတမ်းအတု အများအပြားပေါ်ထွက်လာသည့်အတွက် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ရာတွင်ဂရုစိုက်ရန်လို
နည်းပညာမြင့်မားလာခြင်းနှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအတုများကို အစစ် နီးပါး ခွဲခြားမရအောင် ပြုလုပ်လာကြသည့်အပြင်… read more...
သည်ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်မြင်ချင်းသင်တွေးမိနိုင်တာက ဟ..ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မနေဘဲ..ဘယ်သူ့အိမ် သွားနေရမှာလဲဆိုပြီး..… read more...
ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေသည် မရွှေ.မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊… read more...
အဆောက်အအုံပြင်လို.ကတော့ ဘယ်လောက်သေးသေးဖွဲ.ဖွဲ.ပြင်ပါစေ။ မြို.တော်စည်ပင်ဥပဒေနှင့် မကင်းနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်… read more...
မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ရောင်းဝယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံမတင်သော ရောင်းဝယ်မှု
ပထမတစ်မျိုးမှာ ရောင်းရန် သဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုထားပြီး လက်ရောက်ရယူထားသည့်အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ… read more...
ယခုအခါ အိမ်ငှားနယ်ပယ်တွင် ``စပေါ်´´စနစ်သည် တစ်စတစ်စ လျော့ပါးသွားပြီး ``နှစ်ချုပ်´´စနစ်သည် ကျယ်ပြန့်စွာ… read more...
စရန်ချပြီး ၀ယ်ထားတဲ့အကွက် ပြန်ရောင်းတဲ့အခါ အထင်လွဲခံရ
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာ ငွေအကျေမချေသေးပဲ စရန်ငွေချပြီး တစ်ဖက်လူကို ပြန်ရောင်းသူတွေရှိတယ်။ စရန်ငွေပဲ… read more...
အိမ်တစ်လုံးဟာ သင့်ဘဝအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ
သည်မေးခွန်းကိုသင်တို့ဘဝမှာအမေးခံရဖူးပါသလား..။ ဒါမှမမဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရောပြန်မေးဖူးပါသလား..။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှရုန်းကန်းလှုပ်ရှားပြီး… read more...
လယ်ယာမြေ ကို ရဲရဲသာဝယ်ပါ
လယ်မြေ/လယ်ယာမြေတို.ကို ဝယ်လိုလျှင် ရဲရဲသာဝယ်ပါ။ ဝယ်ပိုင်ခွင့် ရှိနေပါပြီ။ စည်းကမ်းအရတော့ “လယ်မြေ”… read more...
ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ
(၁) ပေးကမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ တည်ရှိသည့် ရွှေ.ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း(သို.) မရွှေ.မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို… read more...
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရာ၌ ရောင်းသူတို့ သတိပြုရန် အချက်များ
မြေအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာ၌ ၀ယ်သူများမှသာ ခိုင်မာမှု ရှိစေရန် ရှေ့နေရှေ့ရပ်များခေါ်၍ စာချုပ်များချုပ်ဆိုခြင်း၊… read more...
B.C.C လျှောက်ထားရာမှာ သိသင့်တဲ့ အချက်တချို.
အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (ဘီစီစီ) လျှောက်ထားရာမှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ.… read more...
ရှပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ “အိမ်ခြံမြေအမွေ” ကို သေတမ်းစာနဲ. ပေးကြပါတယ်။ (အနောက်တိုင်းက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ပိုများပါတယ်။)… read more...
အပျောက်တိုက်ခန်းဝယ်တဲ့ စာချုပ် မှတ်ပုံတင်လို.ရမရ
ဥပဒေအရတော့ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် မလုပ်လဲ ဖြစ်တယ်။ စုပေါင်းမြေပိုင်ကြတဲ့အပျောက်တိုက်ခန်းတွေအတွက်ကတော့… read more...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ပြည်ပကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ၀င်ရောက်လာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံခြား… read more...
တိုက်ခန်းဝယ်ယူမှုက မြေကွက်ဝယ်တာနဲ. မတူဘဲ အပျောက်စနစ်နဲ. ဝယ်ယူရတာမျိုး ဖြစ်တာကြောင့် အပေါ်ယံစစ်ဆေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ… read more...
ခွဲခြမ်းပြီး ရောင်းချတဲ့ မြေကွက်တွေနဲ. အကွက်သစ်ရိုက်ပြီး ရောင်းချတဲ့ မြေကွက်တွေ ဝယ်ယူထားတဲ့ သူတချို.မှာ ဂရန်အမည်(ခြံအမှတ်)… read more...
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရာ၌ ရောင်းသူတို့သတိပြုရန်အချက်များ
ဂရန်မြေဆိုတာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ၊ နည်းဥပဒေတွေ ရှိပြီးသားပါ။ လိုက်နာဖို့၊ ဘယ်လိုလိုက်နာရတယ်ဆိုတာ သိဖို့ပဲ… read more...
တစ်ချို့သောစာဖတ်သူများက ကျွန်တော်တို့ Company Facebook Page Message Box မှတစ်ဆင့် မြေ၀ယ်ချင်လို့ ဘယ်လိုများ ၀ယ်ရမလဲဆိုတဲ့ မြေ၀ယ်နည်းများကို… read more...
ဂရန်မြေ /ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ရောင်းလျှင် မြေပုံကူုးပေးရန် တာဝန်ရှိ
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်များ ခေတ်မစားခင်ကဆိုလျှင် ပြည်သူအများစုမှာ မြေကွက်၊ အိမ်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနမှ… read more...
“မရွှေ.” ဖြစ်တဲ့ မြေကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ. မြေပုံမြေရာဇဝင်ဆိုတာ ပါလာပါပြီ။ မြေတစ်ကွက်ကို… read more...
အိမ်ရှင်က အိမ်ငှားကို ဖယ်လိုလျှင်
အိမ်ငှားကို ဖယ်ထုတ်ဖို.က လွယ်ကူ ရှင်းလင်းနေတဲ့ ဥပဒေရယ်လို. မရှိပါဘူး။ တကယ့်တကယ် ဖယ်ထုတ်နိုင်တာကတော့… read more...
စာချုပ်ချုပ်တော့ မည်ဆိုလျှင် . . . . . အရှုပ်အရှင်း အလျဉ်းမရှိ ဆိုသည့် ကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ယခုအခါ အရပ်ဘက်တွင် စာချုပ်အမျိုးမျိုး ချုပ်ဆိုနေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ငှားရမ်းသည့်ကိစ္စ၊ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ၊… read more...
လယ်ယာမြေများမှ လူနေမြေကွက် အဖြစ်သို.
ထန်းတပင်မြို့နယ်အပိုင် အေးမြို့ကျေးရွာနှင့် ဘေးချင်းကပ်တွင် တည်ရှိသည့် ထိုကွင်းပြင်ကြီး၏ အလယ်တွင် ဝါးတိုင်ကို… read more...
ကန်ထရိုက်နဲ. အကျိုးတူဆောက်လုပ်မယ့် မြေပိုင်ရှင်တွေကြားဂရန်မူရင်းပေးထားတာကြောင့် အရှုပ်အရှင်း ဖြစ်နိုင်သလိုစာချုပ်ချုပ်တဲ့… read more...
လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာနဲ. လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးမှ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမည်
လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ(Ls) နဲ. လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ(LC)တွေ ကိုယ်တိုင် စည်ပင်ရုံးမှာလက်မှတ်လာထိုးမှ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုတဲ့… read more...
စလစ်မှ ဂရန် ပြောင်းလျှောက်လိုလျှင် မူလပိုင်ရှင် ထောက်ခံရမည်
မြေချပါမစ်စလစ်မြေများအားအိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အတွင်း အထွေထွေ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် အဆင့် ဆင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချနေခြင်းကြောင့်… read more...
စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် . . . စာမျက်နှာတိုင်း လက်မှတ်မထိုးခဲ့သည့် ကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ
သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ချုပ်၊ စာချုပ်၏ စာမျက်နှာတိုင်းတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လက်မှတ်များ ရေးထိုးထားကြရန် လိုအပ်မည်ဟု… read more...
သိထားသင့်သော မြန်မာ ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာဝင်များ အမွေဆက်ခံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံအချက်များ
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသည် WILL ခေါ် သေတမ်းစာရေးပြီး အမွေပေးနိုင်သော်လည်း၊ ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် သေတမ်းစာရေးခွင့်… read more...
အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ နေထိုင်အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း (B.C.C) အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ လိုင်စင်အဆောက်အအုံ… read more...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် လယ်ယာမြေဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိထားသင့်သည့် ဗဟုသုတများ
မေး- မြန်မာနိုင်ငံခေတ်အဆက်ဆက် လယ်ယာမြေဥပဒေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး အန်ကယ်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ အခြေအနေများကို… read more...
မြေကွက်၊တိုက်ခန်း တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဒါတွေသိထားသင့်တယ်
မြေကွက်တိုက်ခန်း တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းထားချက်တွေနဲ့ ဖြေကြားချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်........ … read more...
တိုက်ခန်းဝယ်မယ်ဆိုရင် မြေရှင်နဲ. အငြင်းပွားမှုမရှိအောင် သတ်မှတ်သင့်တဲ့ အချက်တချို.
တိုက်ခန်းဝယ်ယူတဲ့အခါ စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုကတည်းက မြေရှင်ကို အမည်ပြောင်းခနဲ. လခကို ဘယ်လောက်နှုန်းထားဆိုတာမျိုး… read more...
ရောင်းချမည့်သူက သူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ ရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတော့ ထုံးစံအတိုင်းပြောပါစေ။ … read more...
ဂရံမြေကိုဝယ် မယ်ဆိုရင် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်
အဆင့်(၁၀)ဆင့် လုပ်ဆောင်မှသာ ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ဤ(၁၀)အဆင့်ကို (၁)ဆင့်မျှ ဈေးမဆစ်ပါနှင့် အခက်အခဲတွေပေါ်… read more...
ငှားရမ်းပြီး နေအိမ်၊ တိုက်ခန်းများအား ပြင်ဆင်မှု လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ လုံးချင်းအိမ်၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းတို့သည်လည်း… read more...
အမွေဆိုင် ဆိုတာ ဘာလဲ
လူသားအားလုံး တစ်ချိန်မှာ အိုကြ၊နာကြ၊ သေကြရအုံးမှာပါ။ မိမိသေဆုံးသွားလျှင် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်၊… read more...
မြေအိမ်တိုက်ခန်း ရောင်းပေါင်စာချုပ်က ခိုင်မာမှုမရှိပါ
ရပ်ကွက်ထဲမှာ နားလည်မှုနဲ. မြေ၊အိမ်၊ တိုက်ခန်းတွေကို ရောင်းပေါင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ပေါင်ကြတာတွေက ဥပဒေအရခိုင်မာမှု… read more...
ဘိုးဘွားပိုင်မြေ (သို.) မြေပိုင်မြေ
၁၈၅၃ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက လူနေဖို.ဆိုပြီး သူဌေးတွေကိုရောင်းခဲ့တာကစပါတယ်။ Free Hold Land လို.ခေါ်ပါတယ်။… read more...
မြေကွက်ခွဲစိတ်တဲ့အခါ မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မြေကွက်ခွဲစိတ်လို.ရနိုင်တဲ့… read more...
ရောင်းသူ နဲ့ ဝယ်သူကြား စရန်ငွေ သတိထား
အရောင်းအဝယ် ဖြစ်တဲ့အခါ ပထစဆုံးချုပ်ဆိုတဲ့ စရန်စာချုပ်မှာ ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူကြား မှားလေ့မှားထရှိတဲ့ အချက်က ရောင်းသူဘက်က… read more...
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
မိတ်ဆွေ၏ဆွေးနွေးချက်အရဆိုလျှင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရရှိပြီးသူက ထပ်ဆင့်ကိုယ် စားလှယ်လွှဲစာပေးခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့်… read more...
စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် . . . စရန်ငွေ အဆုံး ဆိုသည့်ကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ
စရန်ပေး အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ပြုလိုက်တိုင်း စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းရေးသားချုပ်ဆိုလေ့ရှိသော အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ကို… read more...
ပုံစံ - (၁၀၅) ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ
Passport ဆိုတာ "လူပုံ၊ လူရာဇ၀င်"ကို ခေါ်တာပါ။ လူဓါတ်ပုံလေးလဲ ပါတယ် လူရာဇ၀င် အတိုချုပ်လေးလည်း ပါပါတယ်။ … read more...
လယ်ယာမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေမှာ ဆောက်လုပ်ခွင့် နေထိုင်ခွင့် ရှိသလား
မေး။ ။ ပုံစံ(၇)၊ ပုံစံ(၁၇)နဲ.ပတ်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံဆောက်လို.ရနိုင်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ ပုံစံ(၇)ဆိုတာ… read more...
အချက်(၇)ချက်ကြောင့် SP, GP တွေ ပျက်ပြယ်နိုင်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာရထားတဲ့ Special Power ၊ General Power တွေကို အလွန်ခိုင်မာတယ်ဆိုပြီး ဝမ်းသာတတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ… read more...
SP (Special Power) ဆိုသည်မှာ နေရပ်လိပ်စာအတိအကျ၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ဧရိယာအကျယ် အဝန်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ရန်ကုန်မြို့တော်… read more...
ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာ မြေကွက်တစ်ကွက် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သေသေချာချာ စရန် ချကြတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပျက်တယ်။ ပထမတော့… read more...
မြေရှိသည်၊ ဂရန်ရှိသည်၊ ပိုင်ရှင်တော့မရှိ ဖြစ်နေလျှင်
ဂရန်ထဲက မူလပိုင်ရှင်ထံ နို့တစ်စာသဘောမျိုး စာရေးပါ။ (ပိုင်ရှင်မရှိတော့လို့ ဘယ်အကြောင်း ပြန်ပါ့ မလဲ) … read more...
ဂရန်မြေ၏ မူလပိုင်ရှင် အမည်ပြောင်းလိုလျှင်
ပြောင်းလိုသူ၏ အမည်ဖြင့် ၀ယ်ယူထားသော မှတ်ပုံတင်စာချုပ်လိုပါတယ်။ ၀ယ်တာမဟုတ်လည်း အမွေရတာ၊ စွန့်လွှတ်တြာ၊… read more...
လယ်ယာမြေ မှ လူနေမြေ သို့
မည်သည့် လယ်မြေ/ယာမြေကိုမှ လူနေခွင့်၊ အိမ်ဆောက်ခွင့် မပြုဘူးလို့ ဥပဒေမှာ အတိအကျ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လယ်မြေ/လယ်ယာမြေကိုအိမ်… read more...
ကိုဖြူ။ ယနေ့ အိမ်မြေတွေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ပဲ ၀ယ်နေကြတာတွေ့နေရတယ်ဆရာ။ အကျိုးအပြစ်ပြောပြပါ။ ယူတီကေ။ ဥပဒေအရ၊… read more...
ကွန်ဒို ကွန်ဒို နဲ့ ကွန်ဒို တစ်ကယ်စစ်ရဲ့လား
ကွန်ဒိုဆောက်လုပ်မှု များပြားလာသည်နှင့် အမျှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့က ဓာတ်လှေကား၊ အဆင့်မြင့်ရေကူးကန်… read more...
ပုံစံ (၁၀၅ ) ဆိုသည်မှာ
ပုံစံ (၁၀၅ ) ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာမြေစာရင်းဦးစီဌာနအပိုင် နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြေတို.ရဲ.အကျယ်အဝန်းနဲ.… read more...
သိရှိထားသင့်သော မြေအမျိုးအစားများနှင့် မြေအမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီ၏ အသုံးဝင်ပုံများ
၁။ (က) မြေပိုင်မြေ (ခ) ဘိုးဘွားပိုင်မြေ (ဂ) ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကပင် ဓားမဦးချပိုင်ဆိုင်လာ၍… read more...
ရန်ကုန်မြို့ဧ။် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သော ဗိသုကာအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံများအနက် ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးဧ။် အလယ်ဗဟိုဖြစ်ရာ… read more...
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုအေးချမ်းက အိမ်အပြောင်းရွှေ.ပြုလုပ်စဉ် မြေချပါမစ်ပျောက်သွားတာ ပြန်ရအောင် နည်းလမ်းကောင်းလေး… read more...
BOT မြေပေါ်ဆောက်တဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့ ဂရန်မြေပေါ်ဆောက်တဲ့ တိုက်ခန်းရဲ့ ကွာခြားချက်
BOT ( Build Operate Transfer ) စနစ်နဲ့ ငှားထားတဲ့ မြေပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့ တိုက်ခန်းတွေနဲ့ ဂရန်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့… read more...
စာချုပ်ပါအချက်တစ်ချို့ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း သတိပြုဖွယ်
အိမ်ခြံမြေတွေကို အကျိုးဆောင်မပါဘဲ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရောင်းဝယ်ကြမယ်ဆိုရင် စာချုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို သေသေချာချာ… read more...
ရောင်းပေါင်စာချုပ်များဖြင့် အိမ်၊ခြံ၊မြေ ပေါင်နှံမှုများမှာ တရာဝင်မှုမရှိဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများပြား
အိမ်၊ခြံ၊မြေ ဈေးကွက်၌ အရောင်းအ၀ယ်အေးနေချိန်တွင် ငွေကြေးလိုအပ်သည့် မြေရှင်၊ အခန်းရှင်များမှ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်… read more...
ဂရန်မူရင်းကို ကန်ထရိုက်တာဆီ လွှဲဖို့မလို
အကျိုးတူကန်ထရိုက်တိုက်တွေ ဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဂရန်မူရင်းကို မြေပိုင်ရှင်က ကန်ထရိုက်တာဆီ လွှဲအပ်ထားဖို့… read more...
မြူးကြွသော နိုင်ငံခြားသီချင်း၏ သံစဉ်များ လွင့်ပျံ့နေသော ခန်းမကျယ်အတွင်းမျက်နှာတွင် မိတ်ကပ်အဖွေးသား၊ စကတ်အတို၊… read more...
စည်ပင်ဖြိုတော့မည့် တိုက်ခန်း မဝယ်မိရလေအောင်
တိုက်ခန်းဝယ်မယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်မဲ့နဲ့ တရား မဝင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်တွေရှိတာကြောင့် စိစစ်ပြီးမှ ဝယ်ယူသင့်… read more...
ဆရာ့ရှင့်… ကျွန်မ မနီနီပါ ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ အကျိုးဆောင်ဖို. အလုပ်တစ်မျိုး ရခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဒဂုံ အမှတ်… read more...
တိုက်ခန်းဝယ်ပြီဆိုရင် သိထားသင့်သည့် အချက်များ
တိုက်ခန်းဝယ်ပြီဆိုရင်တော့ မရှိမဖြစ် စစ်ဖို့ လိုအပ်တာကတော့ အရောင်းအ၀ယ် ဆက်စပ်စာချုပ်အဆင့်ဆင့်ကို စစ်ဖို့… read more...
“မြေ”….အဆောက်အအုံ ဆိုတာ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ရှိကြသည့် အတိုင်း မည်ကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်စေ… read more...
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေစာချုပ် မှာရောင်းသူပိုင်ရှင် မှတ်ပုံတင် လိပ်စာစိစစ်ပါ
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ်ပြုလုပ်တဲ့အခါ ပိုင်ရှင်၊ ရောင်းချသူရဲ့ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ လိပ်စာတို့ကိုတိုက်ဆိုင်စိစစ်ဖို့… read more...
အထူးဂရန်ပေးရာမှာ မြေဧရိယာဟာ (၁၀၀၀၀) စတုရန်းပေထက် မကျယ်စေရပါ။ (၁၂၀၀) စတုရန်းပေထက် မကျဉ်းရပါ။ (၁၂၀၀) စတုရန်းပေထက်… read more...
ကန်ထရိုက်တိုက်ဆောက်မယ့်သူနဲ့ တိုက်ခန်းဝယ်ယူမယ့်သူတွေ ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ
ကန်ထရိုက်ဆောက်လုပ်မယ့်သူတွေနဲ့ တိုက်ခန်းဝယ်ယူမယ့်သူတွေ သိသင့်တဲ့ အချက်အချို့ကို မေးမြန်းဖော်ပြပါတယ်။… read more...
မြေငှားဂရန်သက်တမ်းတိုးနဲ့ ဂရန်အသစ်လျှောက်မယ်ဆိုရင် သိသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။… read more...
အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ချိန်မှာ ခိုင်မာမှု၊ ဈေးကွက်အခြေအနေ ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပိုင်ရှင်ဘက်က ငွေပြန်မအမ်းနိုင်တဲ့… read more...
မြေငှားရန်ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင် သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ မြေပေါ်အခြေအနေ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။… read more...
ဂရန်မြေကို ခွဲစိတ်မယ်ရင် သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဂရန်မြေခွဲစိတ်တဲ့အခါ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊… read more...
တိုက်ခန်းဝယ်ယူတဲ့အခါ… read more...
မြေအမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှု အခိုင်အမာဆုံးဖြစ်အောင် လွှဲပြောင်းသင့်
အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူသူအနေနဲ့ ရောင်းချတဲ့ မြေရဲ့အမျိုးစားကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီး ခိုမာမှုအရှိဆုံးပုံစံ လွှဲပြောင်းထားသင့်တယ်လို့… read more...
အဆောက်အအုံရဲ့ တန်ဖိုးကို စိစစ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အဆောက်အအုံရဲ့တန်ဖိုးကို စိစစ်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အဆောက်အအုံအမျိုးအစား၊
ပါမစ်မြေ၊ ကျူးကျော်မြေ၊ ဂရန်ရှိသော မြေပိုင်မြေ
ပါမစ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးသော နေရာများတွင် စည်းကမ်းချက်ဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့်… read more...
အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့်ကျေးရွာများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄(၇) အရ သတ်မှတ်ထားပြီး စည်းကမ်းချက်ဖြင့် ယာယီသုံးဆွဲခွင့်… read more...
အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်မှာလား ရောင်းမှာလား ဒါတွေသိထားပါ
အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ရောင်းသူရော၊ ၀ယ်သူပါ သေချာတိကျအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာ အကျိုးဆောင်… read more...
ဂရန်မြေ (မြေငှားစာချုပ်ရမြေ) (LEASE LAND)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (ယခင် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာအဖွဲ့/မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန)… read more...
စလစ်မြေ၀ယ်မည်ဆိုပါက အမည်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း စိစစ်ရန်လို
ရန်ကုန်မြို့စွန် မြို့နယ်များတွင် ဂရန်မရှိသေး သော ပါမစ်မြေများ၊ စလစ်မြေများကို ၀ယ်ယူ မည် ဆိုပါက စလစ်ဟောင်းများ၊… read more...
မြေနှင့်အိမ် အပေါင်ထား၍ငွေချေးယူခြင်းအတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်ချက်များ
မြေနှင့်အိမ် အပေါင်ထား၍ငွေချေးယူခြင်းအတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်ချက်များ 1. လွှဲပြောင်းနိုင်သော မြေအမျိုးအစားဖြစ်ရမည်… read more...
ဘိုးဘွားပိုင်မြေ (ခ) မြေပိုင်မြေ ( FREE HOLD LAND )
၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိလျှအစိုးရသည် ရန်ကုန်ဆူးလေးဘုရားကို ဗဟိုပြုကာ လမ်းကျယ်၊ လမ်းသွယ်များဖြင့် မြေကွက်များဖော်ထုတ်ပြီး… read more...